ChildhoodBiography DCMA Cherechedzo
musha DCMA Cherechedzo
Dhijitari Millenium Copyright Act (DMCA) Cherechedzo.
Isu tinoremekedza kodzero dzevaridzi vane kodzero uye tichashanda nevaridzi vekodzero vataurwa kuona kuti zvinhu zvinotyora zvabviswa pabasa redu. Ndokumbira utumire email ine ruzivo rwese kune kutariswa kwe "Copyright Infringement" kuburikidza neyedu kuonana peji.
Kuisa Chiziviso cheDMCA Kuti ubvise Copyright-Yachengetedzwa Zviri mukati
Mune zviitiko apo iwe unonzwa faira inoputsa copyright yako kana copyright yemumwe munhu waunomiririra, tinokukurudzira kuti ushandise peji ino kutizivisa. Ndapota tipeiwo chiziviso chakanyorwa chine ruzivo rwunotevera:
Zita rako, kero, nhamba dzefoni uye email kero izvo zvaizotibatsira kusvika kwauri.
Tsananguro yebasa rakabvumirwa kodzero yaunoti yakatyiswa nesu.
Tsananguro yekuti pane paWebhusaiti zvinhu zvaunoti zvinotyora zvinogona kuwanikwa. Izvo zvinofanirwa kukwana zveHutwanaBiography kuwana zvinyorwa (semuenzaniso, iyo URL);
Chirevo chekuti iwe une kutenda kwakanaka nekutenda kuti kushandiswa kweiyo copyright copyright haina kupihwa mvumo uye hakuonekwa sekushandiswa kwakanaka.
Chirevo chakanyorwa newe UNDER PENALTY OF PERJURY kuti ruzivo rwamuri kutipa rwuri chokwadi uye kuti ndiwe muridzi we copyright kana wakapihwa mukana wekumiririra muridzi we copyright; uye pakupedzisira,
Yako yemagetsi kana siginecha siginecha.
Ruzivo rwekunyora DMCA Counter-Cherechedzo yekudzosera Zvese Zvakabviswa kubva kune Webhusaiti
Kana iwe uchitenda kuti zvawataura zvanga zvisingazivikanwe kana kubviswa nemhosho, ndokumbirawo utorere ChildityBiography nemanyorerwe ekuzivisa. Inofanirwa kuve nerinotevera ruzivo:
Zita rako, kero, nhamba dzefoni, uye email kero.
Tsananguro pfupi yezvinyorwa iyo yakabviswa uye iyo nzvimbo paiyo Webhusaiti (semuenzaniso, iyo URL) kwayakamboonekwa.
Chirevo UNDER PENALTY OF PERJURY kuti iwe une kutenda kwakanaka kutenda kuti zvinyorwa zvakabviswa kana kuremara nekuda kwekukanganisa kana kumwe kusaziva;
Chirevo chekuti unobvumidza kutonga kweiyo Federal District Court yedare redzimhosva irimo kero yako.
Pakupedzisira, yako yemagetsi kana siginecha siginecha.
ChildhoodBiography kupindura "chero uye zvese zvinotora-pasi zvikumbiro”Iyo inoenderana nezvinodiwa neDhijitari Yemari Yemireniyamu Copyright (DMCA), uye mimwe mitemo inoshanda yepfungwa.